musha > Travel Europe > Europe vanofanira Ona Nzvimbo Dzokunamatira
Europe musha inofa nhoroondo nemagariro uye mukare akitekicha, zvizhinji zvacho unobatwa kubudikidza kondinendi rakakura muunganidzwa nzvimbo dzokunamatira. Ndokusaka nhasi, taona vakasungwa 3 kuti isu nezvokungoridza kuva chakakwana kunofanira-Anoona, akafukidza nyika-mukurumbira zvivakwa mhiri mamwe maguta Europe vanofanira nembiri.
Train Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel neSave A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
1. St Petro Basilica, Guta Vhatikeni
Zvayaiva mukati masvingo rudzi ruduku zvenyika, Guta Vhatikeni, St kwaPetro Basilica Hapana mubvunzo yebudiriro wacho mukuru zvakapembererwa pamusoro mapurani uye nounyanzvi. zvino mumwe zvikuru udo mufanidzo 10 miriyoni Vashanyi pagore, ichi hunoshamisa mamiriro Hakutarisi St Petro Square uye Anozvirumbidza ane opulent wemishonga enhoroondo unyanzvi, machena mbiru, uye nemufananidzo wakavezwa-wakavezwa dome rakagadzirwa naMichelangelo (paunogona achikwira pamusoro, Unofanira angatsunga kutora 491 matanho munzira!).
Kunyange zvazvo iri imwe yakakurumbira gwapa zvakadaro pakati vashanyi, kuchine kuzviomesera yemapfekero vakamanikidzira kuti unofanira kungwarira vasati uchishanyira. Unofanira kupfeka refu mudhebhe (kureva pasina zvikabudura, pasinei inopisa kuti Italian zuva iri), nevakadzi akabvumira kupfeka masiketi refu kupfuura ibvi urefu. Pamapfudzi anofanira kufukidzwa nevanhukadzi zvose nguva dzose.
St kwaPetro Basilica yakazaruka zuva kubva 7 am-7pm muna April kusvika September uye 7 am-6pm kubva October kusvika March. Entry akasununguka (kunyange pane kubvuma mazai ticketed zvikamu, akadai St Petro Treasury uye St Petro Dome), zvisinei, ziva kuti pamwe nekurutsa kunogona refu, nokuda yendege-manyorerwo scanners nokuchengeteka unofanira kupfuura nomunyika kutanga.
Zvinowanikwa muguta Turkey raMwari transcontinental, Istanbul, ari Sultan Ahmed Mosque unonyanyozivikanwa kunzi The Blue Mosque nokuti ayo akasiyana mutema mukati. Yakavakwa hweOttoman Sultan Ahmed I pakati 1609 uye 1616, ichi mamiriro chaizvo anoita se vaviri guru vashanyire kukwezvwa uye chinoshingaira nzvimbo yokunamatira, kureva chechi yapera vasiri vanamati panguva minyengetero shanu daily – nguva dzekunamatira dzinogona kuongororwa pano usati shanyira.
Pane kuzviomesera yemapfekero munhu kuti vashanyi zvose vanofanira kuomerera vasati vapinda chechi. Chekutanga, shangu anofanira kubviswa woiswa zvakajeka mupurasitiki bhegi inopiwa iri chechi usingabhadhari – iwe zvino tiine mukana kusiya shangu venyu cubby buri kana kutakura bhegi newe. Kana totaura pezvokupfeka, Varume vanofanira vasarudze yokusazvibata mbatya uye nechokwadi makumbo avo zvakafukidzirwa, kudzivisa zvinhu zvakadai vanamajasi uye zvikabudura. Vakadzi vanofanirawo kupfeka mbatya dzakasununguka pavanenge vachiona maoko avo, makumbo, uye bvudzi zvakafukidzirwa dzimwe pfungwa dzose. Izvi zvinoreva kuti vanhukadzi vanotarisirwa kupfeka headscarf apo mukati uye, sezvo izvi zvingava pfungwa itsva dzakawanda vaisava Muslim Vashanyi Western, isu dzinorumbidza kudzidza kuti zvakarurama kupfeka zvipfeko ichi mwero kuchikosha usati rwendo.
Entry akasununguka (kunyange chiduku mari dzinobatsira mukuru yokuchengeta kuvaka kunokurudzirwa pamusoro mbudo) uye, kamwe mukati, Photography pamwe mbaravara Unotenderwa, zvichireva zvauri vakasununguka kutora zvakawanda vanoridza ari chechi wacho chaizvo mukati. zvinotarisirwa, zvazvinoita pasina achiti, kuti sezvo Sultan Ahmed Mosque achiri nzvimbo vanoshingaira yokunamatira, kuva nechokwadi kuti kuramba akanyarara uye kuremekedza zvose chivakwa uye chero vanamati uchiri kushanya.
3. The Sagrada mhuri Basilica, Barcelona
La Sagrada mhuri Basilica rava chinhu iconic Spanish nhangaruvazhe, pasinei nokuti chivako ichiri pasi kuvakwa – kunyange basa rakatangwa muna 1882, zviri pari haana kutarisirwa kupera kusvikira 2026! Kunyange zvakadaro, ichi Semi-rakakwana Roman Catholic chechi iri atova mapurani Paaidzidzisa, zvichiita kuti zvazvisingarambiki vanofanira-ona kukwezvana vashanyi kubva pasi pose.
Gamuchira kuchechi uye vashanyi kubva muzana ramakore rechi19, The Sagrada mhuri Basilica iwe Anopiwa 4.5 miriyoni Vashanyi ose gore uye ikozvino unoshanda munhu ticketed kupinda gadziriro somugumisiro – these are available to buy online up to two months before the date of your visit. matikiti izvi kushanda ngadzirambe hwomukova nguva senzira yokuderedza yokuwandisa, zvisinei, kamwe uri mukati Uri wakasununguka kupedza chero mungadai sezvo kufanana vachiyemura runoshamisa mukati. Tinokurudzira kubvumira kanenge 2 maawa kuti zvakanaka kutora iyi mapurani vanonetseka. Vashanyi vachitsvaka kupinda basa chechi, gobvu yakaitirwa 9am Sunday ose uye 8pm Mugovera ose, inogara 1 awa uye chichiitirwa mumitauro inoverengeka.
La Sagrada mhuri Basilica pamutemo zvokurimisa mureza yemapfekero kuti machechi Roman Catholic ari, zvisinei, izvi hazvirevi vanowanzoyemura sezvo zvachose kutevedzerwa sezvazvakaita panguva Sultan Ahmed Mosque kana St Petro Basilica. This Kuva akati, Chichiri yedu dzinoenda kutevera yemapfekero ichi pose pazvinobvira, zvichireva unofanira kubvisa chero Headwear pamusoro kupinda, vanopfeka yakakodzera yokumusoro muviri mbatya mapendekete ako, shure, uye midriff uye vapfeke legwear kuti cover pazasi pechidya.
Europe kwakawanda nzvimbo yakanaka kunamata kuti zvechokwadi encapsulate mashoko unrivaled simba mapurani uye zvechitendero kurudziro. Kuona mavara aya vomuzana ruoko, wokufamba kondinendi nechitima uye bhuku Save A Train kusiya dombo rakapidigura muEurope akawanda zvinoonekwa uye zvinokwezva.
Unoda embed yedu Blog romukova “3 Of Europe vanofanira-Ona nzvimbo dzokunamatira” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga mu peji hwedu kubatana kumusoro kana kushandisa embed.ly kubatana.
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kuchinja TR kuti FR kana haulla uye mimwe mitauro yaunenge wasarudza.
LaSagradaFamilia Mosque Train Travel traveltips Guta Vhatikeni namata
Ini ndiri anogadzira zvemukati uye mukadzi anodada wechiIslam kwenguva yangu yemahara ndinonyora zvemukati uye basa rangu nderekuita abayas, hijabs uye akasiyana eane mwero echiIslam zvipfeko zvevakadzi. - Unogona baya pano ndibate